Ny Asus Zenwatch 2 sy 3 dia hahazo Android Wear 2.0 amin'ny volana aprily | Vaovao momba ny gadget
Ny Asus Zenwatch 2 sy 3 dia hahazo Android Wear 2.0 amin'ny volana aprily
Toa inona ny Google amin'ny Android Wear 2.o toa ny afomanga, hoy izy ireo ao amin'ny tanànako. Efa ho herintaona lasa izay, Google dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy izay ho tonga, amin'ny fotoana iray amin'ny fiainana, ny andiany faharoa amin'ny Android Wear, ny rafitra fiasa izay tadiavin'i Google hanjaka amin'ny fitaovana azo ampitaina avy amin'ireo mpamokatra lehibe. Google dia nandresy lahatra ireo mpanamboatra lehibe afa-tsy Samsung, izay nisafidy ny hampiasa ny rafitra fiasany manokana antsoina hoe Tizen ary ahazoany valiny tena tsara, na amin'ny fitsikerana izany na amin'ny asany, na dia mbola tsy mpamorona araka ny itiavany azy aza ny tontolo iainana.
Herinandro lasa izay dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Android Wear 2.0 Google teo am-pelatanan'ny finday smart LG vaovao, fitaovana izay no voalohany nahatratra ny tsena tamin'ny fanavaozana Android Wear faharoa. Amin'izao fotoana izao ary araka ny hitantsika amin'ny bilaogy Android Wear, ny orinasa dia hamoaka ny kinova farany amin'ny fitaovana rehetra mifanentana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, izay hitantsika fa lasa volana maro. Araka ny nambaran'ny mpanamboatra Asus, Zenwatch 2 sy Zenwatch 3 dia hahazo Android Wear 2.0 manomboka amin'ny volana aprily, efa ho herintaona taorian'ny fampisehoana ofisialy azy.
Tsy fantatsika izay nitranga tamin'ny fivoaran'ny Android Wear 2.0, fanavaozana lehibe izay manolotra endrika vaovao marobe ho antsika, toy ny mety hametrahana fampiharana mivantana amin'ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny fivarotana misy azy eo amin'ireo zava-baovao maro hafa. Araka ny nambaran'i Google tao amin'ny Google I / O farany teo, ny famoahana ity kinova faharoa ity dia nomanina tamin'ny faran'ny taona lasa, saingy rehefa nanakaiky ny volana dia nanambara ny orinasa fa mbola betsaka ny asa tokony hatao hamoahana azy, ka manery azy hanemotra ny fandefasana azy hatramin'ny volana febroary araka ny fantatsika rehetra.
Ity fahatarana ity, tsy misy fanamarinan'i Google, no fiafarana sy fiafaran'ny dia nataon'i Lenovo, tompona Motorola ankehitrinyAo amin'ny tontolon'ny smartwatches, ny tsena iray izay tena rariny amin'ny varotra ary io karazana tara io dia tsy manampy mihitsy. Raha manohy mandaka ireo mpanamboatra i Google, dia azo inoana fa rehefa mandeha ny fotoana dia hisafidy ny hampiasa Tizen an'i Samsung izy ireo fa tsy Android Wear. Ary, raha tsy izany, amin'ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Ny Asus Zenwatch 2 sy 3 dia hahazo Android Wear 2.0 amin'ny volana aprily